कोरोना पोजेटिभ गर्भवति महिलाको सफल शल्यक्रिया, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो – Janata Times
कोरोना पोजेटिभ गर्भवति महिलाको सफल शल्यक्रिया, आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो
पत्रपत्रिकाप्रदेश ५शिक्षा / स्वास्थ्यसमाचार
सिराज खान\_नेपालगञ्ज, असार ६
नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुर शिक्षण अस्पतालमा दोस्रो कोरोना पोजेटिभ महिलाको शल्यक्रिया पनि सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अस्पतालले जनाएको छ । यसअघि सो अस्पतालमा अछामकी २५ कोरोना पोजेटिभ गर्भवति महिलाको आन्द्राको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो । उनको अझैं सोही अस्पतालमा उपचार भैरहेको छ ।
ती दुवै सङ्क्रमित महिलाको शल्यक्रिया काठमाण्डौ बाहिर पहिलो पटक नेपालगञ्जमा सम्पन्न गरिएको मेडिकल कलेजले जनाएको छ । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित भीम अस्पतालबाट रिफर गरिएर पठाईएकी कपिलवस्तु कृष्णनगरकी २७ वर्षीया गर्भवति महिलाको शनिबार विहान सफल शल्यक्रिया गरेर शिशुलाई बाहिर निकालिएको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सहायक निर्देशक डा. नितेषकुमार कनोडियाले बताउनुभयो ।
शल्यक्रियाबाट दुई किलो ४०० ग्रामको स्वस्थ्य बच्चाको जन्म भएको र अहिले आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको डा. कनोडियाले बताउनु भयो । शिक्षण अस्पताल कोहलपुरका अनुसार ती महिला एक महिना अघि मुम्बईबाट फर्किएर बुटवलस्थित क्वारेन्टाइनमा बसेकी थिइन् । उनको पिसीआर परीक्षण गर्दा जेठ ३० कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।
यसअघि अछाम जिल्ला, बयलपाटा अस्पतालबाट रिफर भई कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेज अस्पतालमा भर्ना गरिएकी कोरोना पोजेटिभ २५ वर्षीया महिलाको सफल शल्यक्रिया गरिएको थियो । कोहलपुर अस्पतालमा अहिले दुई जना शल्यक्रिया गरिएकासहित तीन जना जटिल अवस्थाका कोरोना पोजेटिभ विरामीहरुको उपचार भैरहेको छ । ती मध्ये एक जना ८२ वर्षीय पुरुष रुकुम सानोे भेरी निवासी पनि हुनुहन्छ । उहाँलाई जेठ ३२ गते भर्ना गरिएको थियो ।
उक्त अस्पतालमा हालसम्म कोरोना पोजेटिभ दुईजना विरामीको मृत्यु भैसकेको र तीनजना उपचाररत रहेकाले उनका सम्पर्कमा आएका ९० जना भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । (गोरखापत्र)
Related tags : आमा र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था राम्रोकोरोना पोजेटिभ गर्भवति महिलाको सफल शल्यक्रिया
लगानी बोर्डद्वारा २ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानी स्वीकृत
कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको परिवारका सदस्य पनि संक्रमित